आँखामा डार्क सर्कल आएर हैरान हुनुहुन्छ ? याे तरिका अनुसार काेलगेट लगाउनुहाेस् - ज्ञानविज्ञान
आँखामा डार्क सर्कल आएर हैरान हुनुहुन्छ ? याे तरिका अनुसार काेलगेट लगाउनुहाेस्
कोलगेट अर्थात दन्तमन्जन दाँत सफा गर्नको लागि बनाइएको हुन्छ । तर, पछिल्लो समयमा कोलगेट छालाको सौन्दर्यको लागि प्रयोग गरिएका उदाहरणहरु भेटिन्छन्। कोलगेट उत्पादन गर्नेहरुले भने कोलगेटको उत्पादन छालाको नभएर दाँतको पहेंलोपन, दाग आदि हटाउनको लागि उत्पादन गरिने बताउँछन्।
कोलगेटमा सोडा, हाइड्रोजन पेरोअक्साइड, अल्कोहल, मेन्थल आदि मिसावट हुन्छ। कोलगेटले छालाको दाग धब्बा, ब्ल्याक हेड्स, रोम छिद्र, चायाँपोतो, डण्डीफोर आदिलाई हटाउँछ भनेर धेरैले सुझाव पनि दिइरहेका हुन्छन्।
तर कोलगेट कस्तो प्रयोग गर्ने, कसरि प्रयोग गर्ने र कस्तो अवस्थामा प्रयोग गर्न नहुने भन्ने जानकारीको अभावमा धेरैले छालालाई राम्रो बनाउने होडमा झन् कुरुप बनाइरहेका समेत हुन्छन् । त्यसैले आफ्नो छालामा कोलगेट प्रयोग गर्नु अगाडी आफ्ना छालाको प्रकार, उक्त कोलगेटमा प्रयोग भएको केमिकल आदिको बारेमा सचेत हुनुपर्छ।
कोलगेटमा हुने रासायनिक पदार्थले छालालाई सुक्खा बनाइदिन्छन् । त्यसैले डण्डीफोरमा कोलगेट लगाउनाले डण्डीफोर सुक्छ । तर, कोलगेटले डण्डीफोरलाई भित्रै देखि निर्मुल पार्न भने सक्दैन । त्यसैले अनुहारमा धेरै डण्डीफोर छ भने त्यो हटाउनको लागि कोलगेटको प्रयोग गर्नु हुँदैन।
हाम्रो आँखाको मुनिको छाला निकै पातलो र संवेदनशील हुन्छ । त्यसैले अत्यधिक तनावमा रहंदा, सुत्ने समय नमिल्दा, पानीको मात्रा कम हुँदा, थकान महसुस हुँदा आदि समयमा हाम्रो आँखा मुनिको भाग कालो हुन्छ । त्यो कालो हटाउनको लागि केहीले कोलगेटको प्रयोग समेत गर्ने गर्छन्।
धेरै जसो कोलगेटमा सोडियम फ्लोराइड र सोडियम लारियल सल्फेट मिसाइएको हुन्छ। यी दुई केमिकलले छालामा जलन हुने, छाला सुक्खा हुने आदि हुन्छ । त्यसैले यी तत्व भएका कोलगेट आँखाको डार्क सर्कल र ओठको कालो हटाउनको लागि प्रयोग गर्नु हुँदैन।
कसरी हटाउने आँखाको ‘डार्क सर्कल’ ?
तपार्इंको आँखाको तल कालो घेरा पर्छ ? यदि पर्छ भने यस्ता कुराको बेवास्ता गर्नुभन्दा कारण पत्ता लगाई यसको समस्याबाट छुट्कारा पाउनुहोस् । यस्तो नहोस् कि तपार्इंको बेवास्ताका कारण अनुहारको कालो दागले अनुहारलाई नबिगारोस् । कालो घेरा अनुहारका लागिमात्र होइन, स्वास्थ्यको लागि पनि खतरनाक हुन्छ ।
कालो घेरा हुनाको कारण
कालो घेरा धेरै कारणले हुनसक्छ । कहिलेकाहीँ धेरै तनाव लिनाले पनि आँखाको तल कालो घेरा पर्छ । यसको साथै कम सुत्नाले, हर्मोन बदलिनाले, सही जीवनशैली नहुनाले पनि आँखाको तल कालो घेरा बस्छ । हुन त अहिले यस्ता समस्याको लागि बजारमा विभिन्नथरीका क्रिमहरु आएका छन् । तर तपार्इंको अनुहार संवेदनतशिल छ भने यस्ता उत्पादनले असर पनि पर्न सक्छ ।
कालो घेरा हटाउनको लागि गोलभेँडा एउटा उपयुक्त उपाय हो । यसले प्राकृतिक तरिकाले कालो घेरा हटाइदिन्छ । साथै यसको प्रयोगले स्क्रिन फ्रेस बनीरहन्छ । गोलभेँडाको रसको कागतीको एक दुई थोपा मिसाएर लगाउँदा पनि फाइदा पुग्छ ।
आँखाको कालो घेरा हटाउनलाई आलुको प्रयोग पनि गर्न सकिन्छ । आलुको रसमा पनि कागतीको एक दुई थोपा मिसाउनुहोस् र कपासको प्रयोगले मिसिएको रसलाई कालो घेरा भएको ठाउँमा लगाउनुहोस्, जसले यस्ता समस्या रोक्न सक्छ ।
चिसो टी ब्यागको प्रयोग गर्नाले पनि यस्ता समस्याबाट मुक्ति मिल्न सक्छ । टी ब्यागलाई केही समय पानीमा डुबाएर राख्नुहोस् र लगाउनुहोस् । चिसो दूधको लेपले पनि कालो घेरा हट्न सक्छ ।
सुन्तलाको बोक्रालाई घाममा सुकाएर पिस्नुहोस् । त्यो पाउडरलाई थोरै गुलाफ जल मिसाएर लगाउनाले पनि कालो घेरा हट्न मदत गर्छृ ।
यि २ राेगकाे बारेमा पनि जान्नुहाेस्ः
के हाे छारे राेग ? कसरी बच्न सकिन्छ यसबाट ?
मस्तिष्कमा देखा पर्ने रोग हो, छारे रोग । यो रोग नसा सम्बन्धी समस्या हो ।
यसले मस्तिष्कमा विद्युत तंरग पैदा गर्छ जसकारण विभिन्न लक्षण देखा पर्छन् । यस्ता रोग लागेका मानिसलाई हाम्रो समाजमा जुत्ता सुँघाउने तथा धामीझाँक्री लगाएर उपचार गर्ने चलन छ ।
छारे रोग लागेका मानिसमा सुरुमा निम्न किसिमका लक्षणहरू देखा पर्दछन्:
–बिरामी मुर्छा पर्ने
–हातखुट्टा र शरीरक अनियन्त्रित रुपले काप्ने
– बेहोस हुने
– मुखबाट फिँज निकाल्ने
– जिब्रो टोक्ने
यस्ता लक्षण देखा परेमा तुरुन्त स्वास्थ्य चौकी गएर चिकित्सकसँग सल्लाह गरी उपचारका आवश्यक उपायहरू अपनाउनु पर्दछ ।
कम्तिमा २ बर्षसम्म नियमित औषधी सेवन गर्दा यो रोग निको हुन्छ । छारेरोग लागेका मानिसलाई मानसिक तथा शारीरिक रुपमा असर पारिरहेको हुन्छ । यसबाटबाट बच्न समय समयमा चिकित्सकसँग वा मनोवैज्ञानिकसँग परामर्श लिइराख्नुपर्ने हुनसक्छ ।
छारे रोगको उपचार कसरी गर्ने ?
–नियमित रुपमा चिकित्सकसँग सल्लाह गरेर औषधी सेवन गर्ने ।
– तनाव र चिन्ताबाट टाढा रहने ।
– माछा मासु फलफूल तथा सागसब्जी पर्याप्त मात्रामा खाने ।
– मध्यपान, धुम्रपान र लागूपदार्थ जस्ता स्वास्थ्यलाई हानी गर्ने चीजको सेवन नगर्ने ।
– बिहान बेलुका व्यायाम गर्ने ।
कमजोरी हुने र तौल घट्ने,
शरीरका कुनै पनि अंगमा गिर्खा गाँठाहरू आउने,
छालामा नयाँ कोठी पलाउनु वा भएका कोठी ठूलो हुँदै जाने,
मुखमा र जिब्रोमा लामो समयदेखि घाउ हुने,
खाना निल्दा दुख्ने र स्वर फेरिने,
सास फेर्न गाह्रो हुने, खोकी लाग्ने वा खकारमा रगत देखा पर्ने,
लामो समयदेखि ग्यास्टिक, पेट पोल्ने वा उल्टी हुने,
कारण पत्ता नलागेको ज्वरो आइरहने,
क्यान्सर लाग्नै नदिनको लागि के गर्न सकिन्छ ?यसका लागि निम्न कुरामा ध्यान दिनुपर्छ :
सूर्तिजन्य पदार्थ र जाँडरक्सीको प्रयोग नगर्ने,
पान सुपारीहरु नखाने,
अस्वस्थ्यकर खानपिनको बानी व्यवहारमा सुधार गर्ने,
अविवाहित महिलाहरूले ह्युमन प्यापिलोमा भाइरसको भ्याक्सिन लगाउने,
तुरन्त क्यान्सर रोग विशेषज्ञसँग भेटेर सही उपचार सुरु गर्ने,
आयुर्वदले क्यान्सर निको हुँदैन त्यसैले अन्धविश्वासमा नलाग्ने र
क्यान्सरको डाक्टरसँग बसेर उपचार र त्यसका प्रभावबारे राम्रोसँग कुरा गर्ने ।
नेपालमा अहिलेसम्म क्यान्सरको अवस्था कस्तो रहेको छ त ?
Don't Miss it के तपाइलाइ लामाे कपाल मन पर्छ ? यस्ता छन् कपाल लामाे बनाउने घरेलु उपाय
Up Next विषादीयुक्त फलफुल तथा तरकारीबाट कसरी बच्ने ? जान्नुहाेस् यस्ता छन् बच्ने उपाय
प्रधानमन्त्रीको अ.वस्थालाई चिकित्सक के भन्छन् ? प्रधानमन्त्रीको जटिलता के हो ? पुर्ण जानकारी
भनिरहनु पर्ने कुरा होइन तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली केहि समयदेखि अलिक बढि नै स्वास्थ्यको समस्या भोगिरहेका छन् । हुन…
जाडो मौसममा मुटुका बिरामीले ध्यान दिनुपर्ने केहि कुरा यस्ता छन्, जानिराख्नुहाेस्
बिस्तारै जाडो शुरु हुन थालेको छ । मुटुका विरामीहरुको लागि यो मौसम त्यति अनुकुल मानिदैन । चिसो मौसममा मुटुसम्वन्धी समस्या…
यस्ता ५ गल्तीहरू, जसले महिनावारीको अवधिमा समस्यालाई बढाउँछन्
हरेक महिना युवती र महिलाहरूमा महिनावारी हुनु एक प्राकृतिक प्रक्रिया हो । तर यदि यस अवधिमा केही विशेष सावधानी अपनाउन…
राती मोबाईल प्रयोग गर्दा हुने हानीहरु, छोटकरीमा
हामी सबै मोबाईल प्रयोग गछौ । मोबाईल फोन प्रयोग गर्ने बानी सबैमा छ । मोबाईल अहिलेको अत्यावश्यक प्रयोग सामाग्री भईसकेको…
यस्ता सुरक्षा नअपनाए मृत शिशु जन्मिने सम्भावना, गर्भावस्थाको अन्तिम तीन महिनामा
गर्मी मा खुट्टा गनाउने समस्याबाट बच्ने उपाय
१. खुट्टाको स्याहार जुत्ता र मोजा लगाउन बन्द गर्नुपर्छ । सकेसम्म खुट्टा खुल्ला राख्नुपर्छ । यो बेलामा छालामा परेका साना…
आकस्मिक मृत्यु किन हुन्छ ?
रक्तचाप, कोलेस्ट्रोलजस्ता रिक्स फ्याक्टरको जाँच र नियन्त्रण गरेमा धेरै हदसम्म आकस्मिक मृत्युबाट जोगिन सकिने चिकित्सक बताउँछन् । राति सामान्य अवस्थामै…
यस्ता छन् अमलाका अमुल्य फाइदाहरू जान्नुहाेस्
अमला नेपालमा पाइने एक किसिमको रूख हो। यसलाई संस्कृतमा आमलकी भन्ने गरिन्छ। अमला अमिलो स्वाद भएको एक पौष्टिक फल हो…
यस्ता छन्, केहि घरेलु उपाय महिनावारीका बेला रगत धेरै बग्ने छ भने कम हुन्छ
महिलाहरु सबैले भोग्ने समस्या हो महिनावारी यसको विषयमा कोहि पनि खुलेर कुरा गर्न चाहाँदैनन् । यस बेलामा के गर्ने के…
पानीको मात्रा कम हुदा शरीरमा लाग्ने रोगहरु, यस्ता छन्
खराब मुड : शरीरमा पानीको मात्रा कम हुनुको असर शरीरिक रुपबाट मात्र नभई मानसिक रुपमा पनि पर्छ । शरीरमा पानीको…